Qiso Cibro Mudan Qiimaha Qadarta Illaahay Oo Lagu Samro | Himilo Media Group
Qiso Cibro Mudan
Qiimaha Qadarta Illaahay Oo Lagu Samro
Taabiciga weyn ee Curwata Ibnu Subeyr, wuxuu ahaa Nin Caabid ah, Caalim ah, wuxuu ahaa Shakhsiyad la yaab leh, Curwa waxa dhashay Asma Abuu Bakar, waxa Aabe u ah Subayr Bin Cawaam, Waqtigii Waliid Bin Cabdi Malik uu Maamulka Muslimiinta hayey ayuu wuxuu Curwa ka dalbaday inuu ku soo booqdo Caasimadii Dimishiq, Curwa wuu aqbalay dallabka Amiirka, wuxuuna ka amba baxay Magaalada Madiina, wuxuu kaxaystay Wiil inamadiisa ka mid ah oo uu aad u jeclaa, intii uu dariiqa ku sii jirey waxa Adinkiisa ku dhacay xannuun ku xumaaday, ilaa uu Dimishiq galay isagoo la qaadayo oo aan socon karayn, Markii Waliid la kulmay wuu ka xumaaday, Xannuunka Curwa oo Marti u ah halleelay, wuxuu isugu yeedhay Dhakhtaradii Dimishiq ugu aqoonta badnaa, wuxuu yidhi Dawo ha loo raadiyo xannuunka Curwa haya, Dhakhtaradii waxay isku raaceen in Lugta Curwa uu ku dhacay Xannuunka gangari oo aanu Dawo lahayn in la gooyo maahee!!. Laakiin Waliid arrintaa uma bogin, wuxuu yidhi sidee bay u dhacday in curwa iga noqdo isagoo laangadhe ah, isagoo reerkiisii bedqab kaga yimi!!. Laakiin Dhakhtaradu waxay u shegeen in haddii aan hadda adinka la goyn uu xannuunku sii fidi doono, dhimashona keeni doono!!.
Amiirkii warkii Dhakhtarada ayuu u sheegay Curwa isagoo kala tashanaya, Curwa hadal badan ma odhan wuxuu yidhi: ” Illaahay baa Mahad leh”!!.
Markii Dhakhtaradii u soo diyaar garoobeen inay Adinka ka jaraan, waxay ku yidhaahdeen Curwa si Xannuunku kaaga yaraado, aan Dawada Marqadka la yidhaahdo ku cabsiino, Curwa wuu diidey in Xubin jidhkiisa ka mid ah la jaro isagoo aan dareemin, waxay yidhaahdeen haddaa Khamri aan ku siino si dareenkaagu u tago, Curwa wuu la yaabay, wuxuu yidhi; Sidee Khamri u cabaa iyadoo Illaahay kitaabkiisa ku xaaraameeyey!!. Dhakhtaradii haddaa sideen kuu galnaa? Curwa : Sallaad baan gelayaa markaan Sallaada galo sidaad rabtaan yeela!!. Curwa wuxuu ahaa marka uu Sallaada ku jiro mid aan dareemin
Sallaadii buu galay, markii uu sujuudey ayey lugtii hillibkii ka dhameeyeen kadib intay Miinshaar soo qaateen Lugtii ka gooyeen, isagoo aan mar keliya dhaqaaqin!!, Lugtii ayaa Dhiigii joogsan waayey, intay Saliid kulul soo qaadeen ayey Lugtii u geliyeen, dhiigii wuu istaagey, laakiin Curwa wuu miyir beelay, iyadoo xaaladaasi taagan tahay ayaa Amiirkii waxa u yimi war Naxdin leh oo ah: In Wiilkii yaraa ee Curwa watey inuu Fardihii Madaxtooyada dhex galay, kadibnu uu faras biqleeyey (Harraatiyey) wiilkiina uu dhintay!! Innaa Lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun!!, Amiirkii aad buu uga murrugoodey dhibaatooyinkan Curwa isu raacay, Markii Curwa miyirsadey, Amiirkii wuxuu ku yidhi, Illaahay ha kaa Cawilo Adinka lagu gooyey, Curwa wuxuu yidhi: Illaahay baa mahad leh, Amiirkii: Wiilkaagii waan kaaga tacsiyeynayaa illaahay bedelsan ha kaa siiyo!!.. Curwa: Illaahay baa mahad leh. Ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun, Toddoba wiil buu I siiyey mid buu iga qaatay, Afar Waaxood buu I siiyey mid buu iga qaatay!!. Haddaan bukooday imisaan caafimaad qabey, hadduu wax iga qaatay imisuu wax isiiyey!!.
Illaahay waxaan waydiisanayaa inaan Jannada ku kulano.
Curwa wuu roonaaday, wuxuu ku tukubay Ul, Maalin buu u soo galay Amiir Waliid, waxa la fadhiya Odey da’ ah oo wejiga Nabar ku leh oo indha la’, Amiirkii: Curwa odaygan bal warkiisa weydii!?. Curwa: Odayoow maxaa Sheekadaadu tahay?.
Odaygii: Waxaan deganaa Tog Aniga cid iga hodansan ma deganayn halkaa, Anigaa ugu Maal badnaa, ugu Carruur badnaa ugu Naago badnaa, Habeen baan Daad nagu soo dhacay, wuxuu la tegey Maalkii, Carruurtii & Naagihii!!. Waxa waagu ii beryey Anigoo haysta Wiil yar & Awr, Awrkii baa Buubay ( carraray), waxaan damcay inaan soo qabto, Anigoo aan wax badan ka daba ordin ayaan dabadayda ka maqlay qaylo, mise waa wiilkii oo waraabe sito oo madaxa Afka gashaday, waxaan damcay inaan ka rido, laakiin markiiba wuu kala goostay, waan awoodi waayey inaa ka rido!!.
Waan soo noqday Awrkii baan ka daba carraray, waan soo gaadhey, harraati buu Wejiga igaga dhuftay, Wejiguu I burburiyey indhihiina waa iga dhaceen!!.
Curwa wuu yaabay, wuxuu ku yidhi: oo hadda maxaad leedahay!!? Odaygii: waxaan leeyahay waxa mahad iska leh Allihii I siiyey Qalbi fayow iyo Carrab aan ku Xuso!.